चिकित्सककाे सुझाव विपरित किन जबरजस्त सक्रिय बन्न खोज्दैछन् ओली ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more चिकित्सककाे सुझाव विपरित किन जबरजस्त सक्रिय बन्न खोज्दैछन् ओली ?
चैत ५ गते, २०७६ - १८:०४
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै गरेको दृश्य निकै कारुणीक र हैरानी पार्ने खालको थियो । कारुणीक उनको कमजोर अवस्थालाई देखेर हुन्थ्यो भने हैरानी देशको कार्यकारी प्रमुखको गम्भिर स्वास्थ्य अवस्थाप्रति हुन्थ्यो ।
उनी अस्पतालबाट बाहिर निस्कदैं गर्दाको समयलाई धेरैले ध्यानपूर्वक हेरेका थिए । उनी अस्पतालबाट बाहिर निस्कदैं गर्दा निकै कमजोर र सिथिल देखिन्थे । दृश्यमा सहयोगीले समाएर बाहिर ल्याउँदै गर्दा पनि उनी पटक–पटक धरमराएर लड्न खोज्थे । अनुहारमा केहि मुश्कान ल्याउन खोजपनि उनको अवस्थालाई हेरेर सहजै वास्तविकता ठम्याउन सकिन्थ्यो ।
ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएसँगै धेरै शुभेच्छुकले शुभकामना व्यक्त गरे । तर उनको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति ख्याल गर्दै धेरै शुभेच्छुकहरुले राजनीतिबाट सन्यास लिन पनि सुझाए । उनका सहयोगीहरुले पनि जिम्मेवारी विकेन्द्रित गर्न र थोरै जिम्मेवारीमा रहन सुझाव दिए ।
उनकै प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका विष्णु रिमालले मुख नै खोलेर प्रमको जिम्मेवारीलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने र उनलाई आराम दिनुपर्ने भनाई राखे । एक अनलाईन सञ्चार माध्यममार्फत रिमालले प्रमको स्वास्थ्य अवस्था र आगामी भूमिका बारे बोलेका छन् ।
अस्पतालबाट फर्किए लगत्तै भेटघाटमा व्यस्त
ओली फागुन ३० मा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए । ओलीलाई चिकित्सकले कम्तिमा ५/६ महिना आराम गर्न र भेटघाट कम गर्न सुझाव दिएका थिए । तर उनले अस्पतालबाट फर्किएको भोली पल्टैदेखि भेटघाट चर्काए ।
अस्पतालबाट फर्किएको भोलीपल्टै उनले सहयोगी मण्डलसँग भेटघाट गरेका थिए । भेटघाट गरिएको सार्वजनिक तस्बिरमा उनी अत्यन्तै कमजोर र दयनीय अवस्थामा देखिन्छन् । जसमा उनको बसाईसमेत निकै असहजपूर्णं खालको छ । कुर्चिमा बसेका उनले निकै अप्ठ्यारो गरि पाखुरालाई अड्याएका छन् ।
सार्वजनिक तस्बिरमा उपस्थित अन्य सहयोगीहरुले माक्स पहिरहेका देखिन्छन् भने ओलीले श्वास प्रश्वासमै समस्या भएका कारण माक्स लगाएका छैनन् ।
सकि नसकी मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको भोलीपल्टै सहयोगीसँग भेटघाट बढाएका ओलीले त्यसको भोलीपल्ट अर्थात फागुन २ मा भएको सार्क स्तरीय भिडियो कन्फ्रेन्समा सम्बोधन गरे । उनले मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै पुगेर सार्क भिडियो कन्फ्रेन्समा भाग लिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गरेको कोरोनाविरुद्ध सार्क स्तरीय रणनीति तयार गर्ने कन्फ्रेन्समा ओलीले देशको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए ।
सहयोगीले समाएर मन्त्रीपरिषद कार्यालय पुगेका उनी धरमराएको स्वरमा सार्कको भिडियो कन्फ्रेन्समा देखिए । जसको चर्चा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा निकै भएको थियो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमार्फत बोल्न लगाएको कन्फ्रेन्समा ओली भने सकि नसकि उपस्थित थिए ।
पार्टी नेताहरुसँग भेटघाटमा व्यस्त
ओलीले अस्पतालबाट फर्किएसँगै शुभेच्छुकसँग त भेटघाट गरेकै छन् साथै पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग पनि भेटघाट बढाएका छन् । उनले पार्टीका गतिविधिप्रति चाँसो दिँदै सक्रियता बढाएका छन् । ओलीले मंगलबार प्रचण्डसँग भेटघाट गरि पार्टी गतिविधि बारे आफ्नो सक्रिय उपस्थिति देखाउन खोजेका छन् । उनले पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको अन्तरविरोध चिर्न छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
जनाइएअनुसार उनको इच्छाअनुसार नै बुधबार पार्टी सचिवालयको बैठक समेत बोलाइएको छ । जसमा केहि महत्वपूर्णं पार्टी निर्णय गर्ने योजना छ । उनले पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका पहिलाको नै जस्तै सामान्य हो भनि देखाउन भेटघाट तथा बैठक डाकेका हुन् ।
किन जबरजस्त सक्रिय हुन खोज्दैछन् ओली ?
चर्चित पत्रकार अरुण बरालले केहि दिनअघि ‘मेडिकल साइन्स’ र ‘पोलिटिकल साइन्स’ भन्ने शिर्षकमा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र उनको सक्रियताबारे विश्लेषणात्मक टिप्पणी गरेका थिए । जसमा उनले मेडिकल साइन्सलाई पोलिटिकल साइन्सले जबरजस्त जित्न नसक्ने भन्दै प्रकृतिको यथार्थता तिर जान सुझाव दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था र गतिविधिलाई हेर्दा उनि जबरजस्त मेडिकल साइन्सलाई चुनौति दिन खोजेको देखिन्छ । उनि विश्वमै नभएको अद्भुत क्षमताको व्यक्ति आफुँ भएको देखाउन खोजेका छन् ।
ओली हुँदै नभएको अद्भुत क्षमतालाई प्रदर्शन त गर्न लागेका छन् नै त्योभन्दा बढि उनि आफुँसँग रहेको सत्ताको शक्तिमा रहिरहन चाहन्छन् । उनि सरकारको नेतृत्व मात्रै नभएर पार्टीभित्रको नेतृत्वमा पनि निरन्तर रहन चाहेका छन् । जसको कारण उनिमाथि उठिरहेको प्रश्नलाई जवाफ दिन पनि उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भईसकेको भनेर प्रदर्शन गरेका छन् । तर उनको प्रदर्शन भने निकै फितलो प्रकृतिको छ । स्वास्थ्य प्रतिकुलताको बीच देखाइएको प्रदर्शन मिलेको भने छैन् ।
के भनेका छन् चिकित्सकले ?
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंह शाहले नै ओलीको स्वास्थ्य अवस्था अति असामान्य रहेको बताएकी छिन् । उनले स्वास्थ्य अवस्थामा निरन्तर सुधार आए पनि सामान्य जीवन बिताउन कम्तिमा ६ महिना या वर्षदिन लाग्ने बताएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य बारे बोल्दै उनले भनेकी छिन्, ‘मिर्गौला प्रत्यारोपण पछि औषधिको डोजहरु बढी भएकोले उहाँलाई संक्रमणको डर बढि छ । अहिले भिडभाडमा जानै हुँदैन । खास गरेर रुघाखोकी लागेका र अन्य संक्रमण भएका मानिससँग अत्यन्तै जोगिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदै गए उहाँले ६ महिना वर्ष दिनपछि मात्र साधारण मान्छेले जसरी जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ ।’
दिव्या सिंहले प्रधानमन्त्रीले लिने औषधीको डोज निकै उच्च भएको हँदा ३ महिना केहि काम नगरी भेटघाटसमेत बन्द गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
तर ओलीले भने अप्रेसन गरिएको आलोसहित सक्रियता बढाएका छन् । चिकित्सकको सल्लाह विपरित उनी निरन्तर भेटघाट र राजकाजमा जुटेका छन् । उनले आफ्नो अवस्था सामान्य खालको नै भएको बताउँदै भूमिकालाई सक्रिय बनाइरहेका छन् ।
चैत ५ गते, २०७६ - १८:०४ मा प्रकाशित